Mowjadaha qaboojinta ayaa ugu horreyn loo isticmaalaa kuleylka, hawo-qaadashada, iyo qaboojinta (HVAC) iyo ujeedooyinka warshadaha. Waxay bixisaa hawlgal kharash-ool ah iyo tamar wax ku ool ah oo nidaamyo u baahan qaboojin. In ka badan 1500 oo warshadood ayaa isticmaala tiro aad u tiro badan oo biyo ah si ay u qaboojiyaan dhirta. HVAC ...
Nidaamka Daaweynta Biyaha ee Munaaradda Qaboojinta
Shirkadaha warshadaha ee isticmaala munaarad qaboojineysa xarunteeda, nooc ka mid ah nidaamka daaweynta munaaradda qaboojinta ayaa badanaa loo baahan yahay si loo hubiyo hanaan wax ku ool ah iyo nolosha adeegga qalabka dheer. Haddii biyaha munaaradda qaboojinta aan loo daaweynin, koritaanka dabiiciga ah, wasakhda, xajmiga, iyo daxalka ayaa r ...
Hordhac aasaasi ah oo ku saabsan Taawarrada qaboojinta
Taawarka qaboojiyaha waa kuleyliyaha kuleylka, kaas oo kuleylkiisa laga saarayo biyaha iyadoo lala xiriiro biyaha iyo hawada. Taawarrada qaboojinta waxay isticmaalaan uumi-baxa biyaha si ay u diidaan kuleylka howlaha sida qaboojinta biyaha wareega ee loo isticmaalo sifaynta saliidda, dhirta kiimikada, dhirta tamarta, birta birta ...